Baolina kitra - CHAN 2020 :: Niampy mpilalao telo ireo hofantenana Barea • AoRaha
Baolina kitra – CHAN 2020 Niampy mpilalao telo ireo hofantenana Barea
Nampiditra mpilalao vaovao miisa telo ny ekipan’ ireo mpanazatra ny Barea ao amin’ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara na ny CHAN 2020. Niampy an’i Andry Max, Andry Kely ary Santatra izay mpilalaon’ny Fosa Juniors avokoa ny ekipa nasionaly.
“Nahazo karatra mavo roa i Théodin. Mbola mitsabo tena i Lalaina ka izay no nampidirana mpilalao vaovao. Iray amin’i Andry Max sy Andry Kely no hisafidianana ka hatramin’ny sabotsy ho avy izao”, hoy Andriamanarivo Franklin, mpanazatra nasionaly.
Kianja voarakotra bozaka tsy voajanahary no miandry azy ireo any Namibia ka manomboka mizatra an’ izany ny Barea, amin’izao
fotoana izao. Tafavoaka mpandresy tamin’ny isa 3 noho 1 ny Barea nanolo­ana ny klioba Elgeco Plus nandritra ny lalao ara-pirahalahiana, omaly, teny amin’ny kianjan’ity farany.
Nilaza ny mpanazatra fa: “nanaraka ny valopolo isan-jaton’ny toromarika napetraka tao anatin’ny telo andro ireo mpilalao androany (ndlr: omaly)”. “Hivoaka aorian’ny lalao ara-pirahaliana mano­loana ny ekipa voafantina eto Analamanga amin’ny sabotsy ho avy izao ny lisitra farany amin’ireo mpilalao roapolo handeha ho any Namibia”, araka ny fanazavany.
Baolina kitra – «UFFOI 2019» :: Takin’ny teknisiana ny halavan’ireo mpilalao
Baolina lavalava – « Mondial 2019» :: Tafita amin’ny ampahefa-dalana i Pays de Galles sy Aostralia